China Disposable nje nlele igwe nrụpụta na ndị nrụpụta | Limeng
Disposable nje virus tube
Nzube na nkọwa nke ngwa ngwa nje virus
1. A na-eji ya maka mkpokọta na mbugharị nke influenza ahụike, avian influenza (dịka H7N9), aka-ụkwụ-ọnụ nje, akụrụ na nje virus ndị ọzọ yana mycoplasma, ureaplasma na chlamydia metale
2. A na-echekwa nje na ihe atụ ndị yiri ya na-ebugharị n'ime awa 48 na steeti refrjiraeto (ogo 2-8).
3.Virus na ihe atụ ndị metụtara ya echekwara na ogo 80 ma ọ bụ na nitrogen mmiri ruo ogologo oge.
A) Ọ bụrụ na ejiri ihe nlele ahụ anakọtara maka nchọpụta nke nucleic acid malitere ịrịa, a ga-eji ngwa mmịpụta acid nucleic na ndị na-enyocha ọgwụ acid nucleic; ọ bụrụ na e jiri ya kewapụ nje virus, a ga-eji ọkara gbasara ekwentị.
B) Ogige ngwa dị iche iche nwere ihe dị iche iche achọrọ na oke mmiri nke mmiri mmiri. Biko họrọ ngwaahịa kwesịrị ekwesị dịka ntuziaka dị na ozi ịtụ ihe a:
Maka nje virus iji wepụta ihe nlele site na ndị ọrịa, ọnụọgụ mmiri achọrọ bụ n'ozuzu 3.5ml ma ọ bụ 5ml.
Maka nchikota ngwa ahia nke virus na ibughari oge nke nje avian influenza na gburugburu ebe obibi, oke mmiri a choro bu 5mL ma obu 6ml.
Aha ngwaahịa: Disposable virus nlele tube
Size: 18mm * 100mm 50 / igbe ndị mmadụ gụnyere tube * 1, gbanwee * 1.
Nje Virus nlele tube isi mmiri:
Hank mmiri mmiri, gentamicin, fungal ọgwụ nje, BSA (V), cryoprotectants, ndu buffers na amino asịd.
Na ndabere nke Hank's, na-agbakwunye BSA (otu nke ise nke BOVINE serum albumin), HEPES na ihe ndị ọzọ siri ike nke nje nwere ike jigide ọrụ nke nje ahụ n'ọtụtụ ọnọdụ okpomọkụ, belata ọnụ ọgụgụ nje virus ahụ, ma melite nti oma nke virus iche.
Ojiji nke Virus Sampling Kit
1. Tupu nlele, kaa ozi dị mkpa dị na akara nke ọkpọkọ.
2. Dika ihe nlele di iche iche choro, swab ka eji eme ihe nlele na saịtị kwekọrọ.
3. Mee ngwa ngwa swab n'ime tube nlele.
4. Agbaji akụkụ nke swab n'elu tube sampple ma mee ka mkpuchi tube sie ike.
5. A ga-ebufe ihe nlere ahụ a kpokọtara ọhụrụ na laabu n'ime awa 48 na 4 Celsius, na ndị na-agaghị ebuga na laabu n'ime awa 48 kwesịrị ịchekwa -70 Celsius C ma ọ bụ n'okpuru. Ekwesiri itinye ọgwụ mgbochi ma kewaa ya ozugbo enwere ike izipu ya na ụlọ nyocha. Ndị nwere ike inoculated ma kewaa n'ime awa 48 nwere ike ịchekwa na 4 I .Ọ bụrụ na anaghị egbochi ya; ekwesiri ịchekwa ya na -70 ℃ ma ọ bụ n'okpuru.
Pharyngeal swab: Hichapụ ma pharyngeal tonsil na posterior pharyngeal mgbidi na a swab, ọzọ na-emikpu swab isi na nlele ngwọta, na-ewepu ọdụ. (Adabara nlele na ngwaahịa a)
Nke gara aga: Disposable agbanwe agbanwe earloop
Oghere Sampple tube
Disposable oghere tube
Disposable nlele tube
Ahụike oghere tube
Nlele Ahụike Ọgwụ
Disposable ọgwụ ihu
Disposable agbanwe agbanwe earloop